Guddoomiyaha KULMIYE oo socdaal ugu kicitimay Maraykanka iyo Itoobiya | Somaliland.Org
December 27, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee KULMIYE Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa maanta socdaal ugu kicitimay dalalka Itoobiya iyo Maraykanka, ka dib markii sida uu sheegay marti-qaad u fidiyeen Wasaaradda Arrimaha dibedda ee Maraykanku.
Guddoomiye Axmed Siilaanyo oo qaar ka mid ah Warbaahinta dalka kula hadlay Madaarka Hargeysa ka hor intii aanu maanta ka amba-bixin halkaas, ayaa sheegay in uu mari-qaad ka helay Wasaaradda Arrimaha dibedda ee Maraykanka, isla markaana uu kulamo la qaadan doono Madaxda dalkaas, kalana hadli doono arrimaha Somaliland.
Guddoomiyaha oo la waydiiyay khilaaf la sheegay in uu u dhaxeeyo isaga iyo Guddoomiye-xigeenka Xisbiga KULMIYE Muuse Biixi, ayaa sheegay in aanay waxba ka jirin, waxaanu Wararkaas ku tilmaamay kuwo ay baahiyaan qaar ka mid ah dad uu sheegay inay baahiyaan dacaayadaha Xisbiga. Waxaanu tilmaamay in taageerada Xisbiga uu Guddoomiyaha ka yahay ay sii xoogaysanayso.
Sidoo kale, mar la waydiiyay Guddoomiyaha KULMIYE in maadaama uu dhawaanahan ka hadlayay Siyaasadda arrimaha dibedda ee Xisbigiisa, isla markaana uu marti-qaad ka helay Maraykanka, ay taa macnaheedu tahay in uu isu-diyaariyayba hanashada Kursiga, wuu ka gaabsaday in uu jawaab ka bixiyo, hase ahaatee wuxuu si kooban ugaga jawaabay oo uu yidhi, Waxa igu waaajib ah in aan dalalka dibedda kala hadlo arrimaha iyo danaha Somaliland.”
Xoghayaha guud ee Xisbiga KULMIYE Keyse Xasan Cige ayaa xalay sheegay in marti-qaadkan Maraykanku u fidiyay Kulmiye oo kaliya, isla markaana uu guddoomiyahoodu sii mari doono dalka Itoobiya oo uu saddex maalmood ku sugnaan doono. “Wuxuu Addis-Ababa joogayaa saddex maalmood, kollay inta uu joogo Itoobiyana madaxda Itoobiya way is-arkayaan, dabadeedna toos buu u tegayaa Washington.” Ayuu yidhi Xoghayaha guud ee KULMIYE Keyse Xasan Cige.